Azụmahịa elektrọnik na Spain | ECommerce ozi ọma
N’afọ 2016, ndị E-azụmahịa nke Spanish toro nke ukwuu, ma na mpaghara B2C dị ka B2B. Ọ nweela ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ ọbụlagodi n'oge ọdịda akụ na ụba nke oge gara aga. Ngalaba ahụ ka na-asọ mpi ma nye ohere maka ụlọ ọrụ US.
1 Ọnọdụ ahịa ugbu a
2 Ahịa kọmputa nke mba (B2C)
3 Ọrụ E-commerce
4 Nkwụ ụgwọ ịntanetị
Ọnọdụ ahịa ugbu a
E nwere ugbu a isi atọ dị na ahịa e-commerce na Spanish: Nke mbụ, lọjistik abụrụla ihe dị iche na ndị na-ere ahịa Spanish kemgbe iwebata isi ọrụ Amazon.
Nke abuo, a na-ahụta Spain inwe otu ọnụego ekwentị kacha ewu ewu na Europe, na-eme ka ecommerce uto. N'ikpeazụ, ka ahịa ahụ na-abawanye, mkpa ọ dị ijikọ ndị na-enye ọrụ ọgụgụ isi e-commerce nke atọ na nchịkọta na-eto.
Ahịa kọmputa nke mba (B2C)
Productdị ngwaahịa kachasị elu maka ịzụ ahịa n'ịntanetị bụ njem na ụlọ oriri na ọ ,ụ hotelsụ, ire ahịa, ọrụ tiketi, kọmputa, uwe, na nri. Kaadị akwụmụgwọ ha bụ otu n'ime usoro ịkwụ ụgwọ kachasị eji.
Spanishlọ ọrụ Spanish na Asọmpi Kọmịị emepụtala data ịkọwapụtara site na nkeji iri na ise, dabere na ozi ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ maka azụmahịa azụmahịa e-commerce
Enweela mmụba dị ukwuu na nso nso a na ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ na ịdị omimi nke ọrụ metụtara e-commerce a na-enye na Spain n'ihe gbasara ngwa ahịa, nkwakọba nke mbupu na mmezu ọrụ.
Usoro ịkwụ ụgwọ kachasị n'ịntanetị maka ndị na-eri ihe na Spain, nke e mere atụmatụ na 90% nke ngụkọta, bụ site na debit / kaadị akwụmụgwọ, na-esote Paypal. Ndị na-egwu Ecommerce na-agbakwunye nhọrọ ịkwụ ụgwọ / nkwụnye ego iji meziwanye mgbanwe ntụgharị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụzọ ịkwụ ụgwọ » Azụmahịa kọmputa na Spain